Gmail အား လုံခြုံအောင် အသုံးပြုနည်း | Digital Tea House
Gmail အား လုံခြုံအောင် အသုံးပြုနည်း
အီးမေးနှင့်စာပို့စနစ်	(	)
Gmail > Setting > Management your google account > Password > two step verification > Recovery phone > Recovery Email
Gmail ဆိုသည်မှာ စာတိုက်စာပို့စနစ်နှင့် တူသည့်အင်တာနက်သုံးစာပို့ခြင်း Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gmail အား Google မှ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီး Google Account နှင့် Login ဝင်အသုံးပြုတာဖြစ် ပါတယ်။Gmail ကို Google Play Store မှ Download ဆွဲအသုံးပြုနိုင်သလို Browser တွေထဲမှလည်း ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Gmail ဟာ တစ်ခြားအကောင့်များစွာကို ဖန်တီးအသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အကောင့် ကိုတစ်ဦးတစ်ယောက်က ရယူသွားခဲ့မည်ဆိုလျှင် အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ အကောင့်ကို လုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက် Gmail Setting ထဲတွင် “Management your google account” ဆိုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများကို Security ထဲတွင်ဝင်ရောက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
စကားဝှက်များကို အမြဲပြောင်းလဲအသုံးပြုနေသင့်သည့်အတွက် Security ထဲမှ Password ဆိုသောနေရာတွင် မိမိစကားဝှက်အားအလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ စကားဝှက်ပြောင်းလဲမည်ဆိုလျှင်လက်ရှိထားထား​သော စကားဝှက် (Current Password) ကို အရင်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပြီး မိမိအသစ်ထားချင်သည့် စကားဝှက် ( New Password) ကို ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။(Retype new password) မှာတော့ရိုက်ထည့်လိုက်သည့်စကားလုံး အမှားအယွင်းမဖြစ်​အောင်တစ်ဆင့်ခံထား​ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ မိမိစကားဝှက်ကို မမှတ်မိဘူးဆိုပါက “Forgot Password? “ မှတဆင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ “Forgot Password” ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မည်ဆိုလျှင် မိမိ Gmail Account ဖွင့်ထားသောဖုန်းနံပါတ်ထဲသို့ ကုဒ်နံပါတ်​ခြောက်လုံးပါ မက်ဆေ့တစ်ခုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအကောင့်ဖြစ်​ကြောင်း သက်သေခံဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်များကို ပြထားသည့်နေရာမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး မိမိအကောင့်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
2-step verification (ထပ်ဆင့်အတည်ပြုခြင်း)
2-step verification ဟာ သုံးစွဲသူများ၏အသုံးပြုနာမည်(Username)၊ စကားဝှက် (Password) ထက် ပိုပြီး လုံခြုံသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကောင့်ကို စကားဝှက်သိရုံ၊ နာမည်သိရုံ နှင့် အကောင့်ကို ဝင်သုံးလို့မရ​တော့ပါ။အသုံးပြုနေကြမဟုတ်သည့် ဖုန်း ၊ ကွန်ပျူတာများအားအသုံးပြုပြီး မိမိအကောင့်ကို သုံးမည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကုဒ်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်မှသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့လာသည့် ကုဒ်များလည်းတစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်မတူညီသလိုအချိန်တစ်ခုကြာသွားလျှင်လည်းကုဒ်အသစ်ထပ်ပို့ သည့်အတွက် လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ကုဒ်များကို Google Authenticator ကုဒ်ထုတ်လုပ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်မှ ရရှိနေပါတယ်။
အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် 2-step verification ထဲဝင် ၊ “Get Started” ကိုနှိပ်၊စကားဝှက်ထည့်သွင်းပြီး စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Two Factor Authentication ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့
မိမိတို့အိမ်တွင် ငွေကြေးနှင့် တန်ဖိုးကြီးလက်၀တ်လက်စားများကို လွယ်လွယ်ကူကူဗီဒိုထဲတွင် ထည့်ထားကြမည်ဆိုပါစို့။ အိမ်သော့ကိုဖျက်၍ သူခိုး၀င်ပြီဆိုလျှင် လွယ်လွယ်ကူကူယူသွားနိိုင်တယ်။ သို့သော်ထိုပစ္စည်းများကိုမီးခံသေတ္တာထဲသို့ ထည့်ထားမည်ဆိုလျှင် အိမ်တံခါးကိုဖြတ်နိုင်ရင်တောင်မှ မီးခံသေတ္တာ ကုတ်နံပါတ်ရမှ သိမှသာ ထိုပစ္စည်းများကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်တယ်။
ထိုဖြစ်စဉ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြည့်လျှင် အိမ်တံခါးသော့သည် Password , မီးခံသေတ္တာကိုကုတ်နံပါတ်ထားခြင်းသည်2Factor Authentication process ဖြစ်တယ်။
Recovery Phone Number and Email (အကောင့်ပြန်လည်ရယူရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ အခြားEmail တစ်ခုထည့်သွင်းထားခြင်း)
Recovery Phone နဲ့ Recovery Mail ထဲကိုဝင်ပြီး ဖုန်းနံပါတ်၊ အခြား Email တစ်ခုထည့်သွင်းထား ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာစကားဝှက်မေ့သည်ဖြစ်​စေ၊၊ အကောင့်အား အခြားသူတစ်ဦးဦးကရယူသွားသည် ဖြစ်​စေ ပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Phone Message သို့မဟုတ် E mail ထဲသို့ ကုဒ်နံပါတ်များပို့ပေးပြီး ယင်းကုဒ်နံပါတ်များကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါကဤအကောင့်သည် မိမိအကောင့်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးပါတယ်။ အကောင့်စတင်ဖွင့်ကတည်းက Recovery Phone နဲ့ Recovery Mail ကို ထည့်သွင်းထားသင့်ပါတယ်။
Google Manage Device > Gmail > Setting > Management your google account > Manage devices
Manage Device ထဲတွင် တွေ့မြင်ရမှာကတော့ မိမိ၏ Gmail Account Login ၀င်ထားခဲ့ဖူးသည့် စက်ပစ္စည်းများကိုတစ်နေရာတည်းတွင် စု‌ပြီးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ Gmail Account အသုံးပြုထားခဲ့ဖူးသည့် စက်ပစ္စည်းများကို ဤနေရာတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားသည့်ဖုန်း (သို့မဟုတ်) ပျက်သွားသည့် Computer များမှာ မိမိ၏အကောင့်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားခဲ့မယ်ဆိုပါက Sign Out ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ဖုန်း (သို့မဟုတ်) ပျက်သွားသည့် Computer ကို ပြန်ရှာလိုပါက Findalost Device ကို နှိပ်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာ တွေ့ရှိပါက Don't recognizeadevice? နှိပ်၍ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Download your data (မိမိအချက်အလက်များအား ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်ခြင်း)
Gmail > Manage your account > Data & personalization > Download,delete,or makeaplan for your data > Download your data
ပထမဆုံး မိမိ Download ပြုလုပ်လိုသည့် Dataများကိုရွေးပေးရန်လိုအပ််ပါတယ်။ ဥပမာ-ဓာတ်ပုံ၊ Mail၊Google Drive အစရှိသဖြင့်) ဒုတိယအဆင့်တွင် သိမ်းဆည်းလိုသည့် နေရာ(ဥပမာ-Driv,Dropbox, OneDrive အစရှိသဖြင့်) ရွေးချယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ထို့နောက် သိမ်းဆည်းလိုသည့် အကြိမ်အရေအတွက်၊ ဖိုင်အမျိုး အစားနှင့် ဖိုင်တစ်ခုစီတွင်ပါ၀င်မည့် size ကိုရွေးချယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းသည့်ဖိုင် အမျိုးအစားကို zip ဖိုင်အမျိုးအစားနှင့် tgz ဖိုင်အမျိုးအစားနှစ်ခုတည်းရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ဖိုင်တစ်ခုတွင်အနည်းဆုံး 1 Gigabyte (1 GB) မှ အများဆုံး 50 Gigabytes (50 GB) အထိ မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက် Creat Export ကိုနှိပ်၍ သိမ်းဆည်းခြင်းစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Makeaplan for your account (Inactive Manager) အကောင့်အား Plan ပြုလုပ်ထားခြင်း
Gmail>Manage your account>Data & personalization>Download,delete,or makeaplan for your data>Makeaplan for your account
Google အကောင့်အား အသုံးပြုခြင်းမရှိပါက အသိပေးချက်ပေးပို့သည့် Plan တစ်ခုပြုလုပ်ထား နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မိမိ Google အကောင့်အားအသုံးပြုခြင်းမရှိပါက မိမိနှင့်မိမိပတ်သက်​ သောသူများထံသို့ Mail ပို့ခြင်း ၊ SMS ဖြင့်သတိပေးခြင်းများ၊ မိမိ Google Account ထဲရှိ Data များကိုအသုံး ပြုခွင့်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမပြုကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းသည့် ကာလကို အနည်းဆုံး ၃လ ကနေ အများဆုံး ၁၈ လအထိ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားသည့် လမရောက်မှီ တစ်လ ကြိုတင်၍ မိမိထံသို့ ရှေးဦးစွာ Email ပို့ခြင်းများ ၊SMS ဖြင့်အကြောင်းကြားမှုများ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်အတွင်း Google အကောင့်အား အသုံးမပြုပါက ဆက်လက်အသုံးပြုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ဟု ယူဆကာ မိမိ သတ်မှတ်ရွေးချယ်ထားသည့် လူများ ထံသို့ မိမိ ၏ Google Account Data များနှင့် ချန်ထားခဲ့သည့်စာများကိုပေးပို့ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် အကောင့်အား ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းထားခြင်း ကိုကြိုတင်ရွေးချယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
DeleteaGoogle Service ( Google မှ၀န်ဆောင်မှုအားဖျက်ခြင်း )
Gmail>Manage your account>Data & personalization>Download,delete,or makeaplan for your data>Deleteaservice or your account>DeleteaGoogle Service
Youtube တွင် Upload လုပ်ထားသည့် Video များ၊Gmail များ ၊ Play Games အချက်အလက်များ၊ Google pay အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွက်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Delete your Google account (Google အကောင့် အားဖျက်ပြစ်ခြင်း)
Gmail>Manage your account>Data & personalization>Download,delete,or makeaplan for your data>Deleteaservice or your account>Delete your Google account
Google အကောင့်ကိုဆက်လက် အသုံးမပြုလိုတော့ပါက အပြီးတိုင်ဖျက်ပြစ်နိုင်ပြီးဖျက်ပြစ်ခြင်းအောင်မြင်ပါက မိမိအကောင့်အားပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ဒေတာများပြန်ယူခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဦးစွာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။ "Delete your account" အားနှိပ်၍အကောင့်စကားဝှက်ထည့်ကာအကောင့်ဖျက်ခြင်း အားဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အကောင့်ပျက်ခြင်းအောင်မြင်ပါကအကောင့်သည် LogOut ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးလုံးဝပျက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင့်နှင့်ပက်သက်သော မည်သည့် data မှ ကျန်ခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။